थोमस डेकरले मनोवैज्ञानिक डरावनी सुन "Jack Home Goes" - iHorror को साथ स्ट्राइक गर्दछ
घर	हरर मनोरन्जन समाचार	थोमस डेकरले मनोवैज्ञानिक डरावनी सुन "ज्याक घर गयो"
थोमस डेकरले मनोवैज्ञानिक डरावनी सुन "ज्याक घर गयो"
by Waylon जोर्डन अक्टोबर 12, 2016
by Waylon जोर्डन अक्टोबर 12, 2016 880 हेराइहरू
ज्याक घर गयो रोमान्टिक कमेडीको शीर्षक जस्तो लाग्छ वा आफूलाई खोज्नको लागि एउटा मानिसको जरामा फिर्ता यात्राको बारेमा राम्रो नाटक। जब उहाँ त्यहाँ पुग्नुहुन्छ, उसले व्यक्तिहरूको समूह भेट्टाउनेछ जसले उहाँलाई प्रेम गर्दछ र आफ्ना सपनाहरूको पालनपोषण गर्न चाहन्छ र उसलाई आफूकै सर्वश्रेष्ठ संस्करण बन्न मद्दत गर्दछ। यो ती फिल्महरू मध्ये एक हो जुन तपाईंलाई खुशी र सन्तुष्ट महसुस गर्न छोडिन्छ जब क्रेडिट रोल हुन्छ।
त्यो हो नहीं थॉमस Dekker द्वारा बनाईएको फिल्म। यसको सट्टामा, यो मनोवैज्ञानिक हानी पुर्‍याउने बाँकी उत्कृष्ट कृति जस्तै, शीर्षक एक रियस हो।
फिल्म खुल्ने बित्तिकै, ज्याक थर्लो (रोरी कुल्किन) आफ्नो दिनहुँको जीवनको बारेमा जाँदैछ जब उनले फोन कल पाउँछन्। उनका बुबाआमा कार दुर्घटनामा परेका छन्। उनका बुबा मारिए, तर उनको आमा (अतुलनीय लिन शा द्वारा खेले) बम्प र चोटपटकको बाबजुद, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। ऊ चाँडै घर फर्किरहेको छ आफ्नो आमाको हेरचाह गर्न र बुबाको अन्त्येष्टिको प्रबन्ध गर्न। त्यो क्षण हो जब उसको समस्या साँच्चै सुरु हुन्छ।
पछि के हुन्छ विगतको सुस्त जलेको यात्रा हो किनकि जैकले बाल्यावस्थाको घटनाहरूको साथ सामना गरे जुन उसले लामो समयदेखि दमित गर्यो। जसै उसका दुःस्वप्नहरूले उसको वास्तविकतालाई आक्रमण गर्न सुरू गर्दछन्, उसको संसार ब्यवस्थित रूपमा नियन्त्रणबाट बाहिर घुस्छ।
जलक, कच्चा र कमजोर जोनिको मानस ना bare्गो छ रूपमा Culkin एक शानदार स्तरित प्रदर्शन दिन्छ। प्रत्येक प्रकाश जुन आउँदछ उसलाई परिवर्तन गर्दछ र अभिनेता रेजिष्टर गर्दछ कि उसको सम्पूर्ण शरीरमा परिवर्तन हुन्छ। मलाई पक्का विश्वास छैन कि मैले कहिल्यै कुल्किनलाई राम्रो प्रदर्शन दिएको देखेको छु। यस फिल्मलाई हेरेपछि म के कुरामा निश्चिन्त छु कि हामीले आशा गर्न सक्दछौं कि भविष्यमा उसले मुख्य भूमिका खेल्नेछ। उहाँ केवल उल्लेखनीय प्रतिभाशाली मात्र हुनुहुन्न, तर उहाँसँग आफ्ना श्रोताको पर्दाको प्रत्येक आन्दोलनको अनुसरण गर्न प्रलोभनमा पार्ने जन्मजात क्षमता छ।
र त्यसपछि त्यहाँ लिन शाई छ। शाई डरलाग्दो संसारको मेरिल स्ट्रिप हो र उनले फेरि पनि प्रमाणित गरिन् कि उनी ज्याककी आमा टेरेसाको भूमिकामा निर्वाह गर्ने शक्ति हुन्। एक क्षण उनी असुरक्षित र मायालु आमा हुन् र अर्को पटक क्रोध र हिंसाले उफ्रिन्छिन। उनी कसरी विश्वासपूर्वक र यस्तो सहज सजिलोसँग गर्छिन् रमा खेल्ने महिला जत्तिकै रहस्यमय छ।
डेकरले कास्ट आउट टेलेन्टेड अभिनेता र अभिनेत्रीहरूको साथ। Daveigh चेस (उर्फ सामारा इन रिंग) ज्याकको सबैभन्दा मिल्ने साथीको भूमिकामा चम्किन्छ, र लुक्स हन्टर धुम्रपान गर्ने ज्याकको सेक्सी सेक्सी सेक्सी छेउछाउको छिमेकी हो जसको भयावह मनसाय हुन सक्छ वा हुन सक्दैन। ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् र तपाईं पनि निक्की रीड भेट्टाउनुहुनेछ गोधूलि फ्रन्चाइजी र फक्सको मा Betsy रॉस को रूप मा उनको भर्खरैको कार्यकाल निद्रा लागेको खोक्रो.
तर ती सबै प्रतिभा पर्दा पछाडि आश्चर्यजनक काम बिना केही पनि आउँदैनन्। डेकरको स्क्रिप्ट र निर्देशनले दर्शकहरूलाई अनुमान लगाउँदछ, कहिले पनि ठोस आधारको प्रस्ताव गर्नुहुन्न। उसले चतुराईपूर्वक हामीलाई वास्तविकताबाट भ्रममा पार्छ र फेरि चेसबोर्डमा टुक्राहरू जस्तै फिर्ता लैजान्छ। फिल्ममा आतंक वास्तविक छ, र सबैभन्दा खराब, यो अपरिहार्य छ।
सेरी टार्जुसेनको होन्टिंग स्कोर र अस्टिन एफ। स्मिटको स्टाइलिश छायांकन संग जोडिएको, यो एक त्यस्तो फिल्म हो जुन तपाईं याद गर्न चाहनुहुन्न।
ज्याक घर गयो सिनेमामा र VOD अक्टुबर १,, २०१ 14 लाई मोमेन्टम पिक्चर्समा रिलिज हुन्छ। तपाईंको स्थानीय लिस्टिंग जाँच गर्नुहोस् र यस फिल्मलाई ASAP हेर्नुहोस्! यो चलचित्र एक भावनात्मक रोलर कोस्टर हो जुन सवारीको लागि निश्चित रूपमा महत्वपूर्ण छ।